Umzi-mveliso wezaKhaya zangaphakathi-China Abavelisi beziXhobo zangaphakathi, abaXhasi
I-BMW x5 g05 i8 E36 E39 i-FandG chassis yesikhumba somntu wokutshintsha
Utshintsho olulula njengolo. Isibonisi sokukhanya Isibonisi sombala wokuqala. Ayisiyo kutshatyalaliswa kuphela kodwa ikwangaphakathi, kusetyenziswa ukukhanya kwe-LED yoqobo. Inkqubo ye-BMW ye-OEM. Umgangatho woqobo we-chrome owotshwe ngumtya wokuhombisa we-BMW, ​​unxibelelwano olungenamthungo, ubomi obude, ubukhazikhazi obuhlala ixesha elide. Ukuphumla kwesikhumba, zive ukhululekile. Utshintsho ngalunye lufana nokuzichukumisa, ukhululekile ngaphandle kwenkcazo. Hambisa ngokuchanekileyo. Konwabele ukukhwela.
Eli qhosha lokutshintsha ikristale liya kuthatha indawo yeqhina lakho lenguqu ekhoyo. I-crystal gear shift knob yenziwe nge-crystal cut cut crystal, efana ne-Swarovski crystal, efana necebo lokulawula iglasi elikhethwe yi-BMW. I-crystal yeqhina lokushiya iigiya linento ekubambisayo, liba ngumtsalane kunye nefashoni kumbindi wangaphakathi we-BMW. I-Crystal Gear Shift knob ixhotyiswe nge "X" yemodeli yelogo, kwaye ukukhanya kukhanyisiwe ukusuka ezantsi, kuyenza ibe ntle ngakumbi ...
Umboniso wemveliso: Inkcazo: Ngokusekwe kwi-BMW 7 Series gearshift yokubamba isibambo sokuvula, esisebenza kuthotho olu-1 lwegumbi ezintathu, uchungechunge lwe-2 lokuhamba, i-X1 kunye ne-X2. Umbala wokuqala womboniso wesikhombisi sokukhanya. Ngokwe-1 yoqobo: iplagi yokuvelisa kunye ne-slot eyi-100% epheleleyo, kusetyenziswa inkqubo ye-BMW OEM kunye nenkqubo ye-BMW yoqobo ye-chrome yokuhombisa, uqhagamshelo olungenamthungo, ubomi obude, ukukhanya okude. Inkxaso yesikhumba, zive ukhululekile, lonke utshintsho lufana nokuzichukumisa ...
Sisebenzisa umbala wokuqala, isibane sesibonakaliso sokubonisa izixhobo, sisebenzisa ikristale ye-BMW yomgangatho wokuqala we-chrome yokuhombisa. Zonke iimveliso zokwenza kwethu zi-1: 1 eziveliswe ngokwemveliso yoqobo ye-BMW.
Iqhina le-cystal eliqaqambileyo le-Electroplated ye-BMW lonke uthotho. Inkqubo yokuphamba ngombane esemgangathweni yokubuyisela ukufakwa kombala wemoto yoqobo akuchaphazeli ukujikeleza kunye nokusetyenziswa okubalulekileyo. Ukuxhathisa kweScartch kunye nokuthintela unyango lweMirror umphezulu wonyango wenkunkuma.